Faniriana 5 ho an'ny Browser ... er Opera | Martech Zone
Faniriana 5 ho an'ny Browsers… er Opera
Talata, Jolay 24, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Modifoo dia nangataka ahy haneho hevitra momba ny zavatra tsapako fa mila mahazo fizarana tsena ny mpanamory Opera. Opera dia mpizaha tena mahafinaritra avy any Norvezy izay miasa ary manome endrika mahafinaritra. Tena mpankafy ny kinova finday mandeha amin'ny findaiko aho. Opera mety tsy mankasitraka ny valinteniko manoloana an'io - na koa amin'ny browser hafa - fa mandeha ihany.
Faniriana 5 ho an'ny Opera
Manamboara singa iray amin'ny data grid izay azo hatsaraina amin'ny fampiasana HTML fototra ary angamba CSS mandroso sasany. Tokony hanana paging, sorting, edit-in-place, sns.
Manangana singa mpamaky haino aman-jery izay manohana ny Quicktime, Windows Media, ary Real Audio. Avelao indray aho hivoatra aminy hampiasa HTML sy CSS fotsiny. Manampia fahaiza-mandeha.
Manamboara singa mpamoaka lahatsoratra izay hamoaka HTML sy CSS azo oharina amin'ny mpanonta an-tserasera tsara. Avelao ny mpampiasa hivoatra aminy, handefa ary hisintona azy avy amin'ny alàlan'ny XML-RPC ary na dia FTP aza.
Manamboara singa iray amin'ny tabilao mifaninana amin'ny tabilao ao amin'ny Excel. Avelao hamatotra azy amin'ny datagrid tsy misy fangarony.
Tsy misy na aiza na aiza ao amin'ny pejin-tranonao misy famantarana fandraisana ho an'ny Developers! Hanamboatra na handrava ny browser-nao ny mpamorona. Ny fahaizana mampiasa navigateur hampidirina amin'ny vahaolanao no fomba haingana indrindra ahazoana ny tsena.
Raha fintinina, te-hahita Opera aho mamorona ary mandika ny fitsipiky ny mpitety. Safari sy ny iPhone manao an'ity fotsiny. Tsy milalao ny lalàna izy ireo fa manao ny lalàna!
Mitohy mandeha an-tserasera ny fangatahana ary mihasarotra hatrany. Ireo mpitety manohana ireo singa fototra izay jerentsika RIA ny haitao hananganana, toa ny Flex sy ny AIR, dia hanova ny lozisialy ho toy ny indostrian'ny serivisy ary hahazo ampahany betsaka amin'ny tsena.
Asao ny olona hiasa ao amin'ny tranonkalanao, Opera. Avy eo dia hilalao ao izy ireo!
Jul 25, 2007 amin'ny 4: 12 AM
Misaotra nizara ny eritreritrao.
Manaiky tanteraka aho fa ny Opera dia tsy maintsy manamboatra fomba hafa noho ny "tsotra" hampifaly ireo mpampiasa. Tamin'izany no nahazoan'izy ireo ny (angamba) mpizaha tena tsara indrindra, saingy 5% ihany no tena mampiasa azy. Mila fomba hafa izy ireo ary satria tsy manana Microsoft leverage dia mila mamorona famoronana.
Tiako ny hevitrao momba ny fampahatsiahivana ny mpandrindra. Hevitra tena tsara.
Jul 25, 2007 amin'ny 7: 52 AM
Lisitra tena tsara, ary ny teboka farany dia mampieritreritra indrindra. http://dev.opera.com/ misy ary misy atiny tsara nefa ahoana no tokony hahitan'ny olona azy eh? Ny vaovao tsara dia ny maro amin'ireo fanirianao dia mety hitranga haingana kokoa noho ny eritreretinao - ahoana ny
Ny santionany amin'ny horonantsary nataon'i WHATWG ary kinova fijerena Opera misy fanohanana VIDEO.
Tsy dia mazava amiko tsara ny ao an-tsainao momba ny fanambarana sy ny retrieval fanambarana, fa ny specE contentEditable dia hanome ny ankamaroan'ny "fantson-drano".
Ny charting dia faniriana mahaliana fa tsy amin'ny tondrozotra akory ny AFAIK, fa ahoana kosa ny Opera mendrika Fanohanana SVG? Miaraka amin'ny scripting kely dia ho azonao ny tabilao.
25 Jul 2007 amin'ny 3:13 PM
Izaho dia miasa eo amin'ny antony tsy aseho ny hevitrao… bibikely sasany any ho any! Argh!
Jul 27, 2007 amin'ny 3: 25 AM
… Angamba satria mampiasa Opera izy? 🙂
Btw, toa tsy mandeha ny trackback - amin'ny "faniriako 5" avy aminao… Mety misy ifandraisany ve izany (heveriko fa tsy mpandahatra fandaharana fotsiny aho?)
Aug 17, 2007 amin'ny 11: 35 AM
Mart, ny fitsapana momba ny Opera izay meloka dia mila fitsapana - noho izany miala tsiny amin'ny spam fanehoan-kevitra 😉
Doug, angamba manana plugin "fiarovana ny hevitra" vitsivitsy ianao izay mieritreritra fa fanafihana fanoratan-dàlana an-tsokosoko ilay hevitra?